Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka EU oo Taliska Wayaanaha Uqoray Waraaq Cadho Leh.
Baarlamaanka EU oo Taliska Wayaanaha Uqoray Waraaq Cadho Leh.
Posted by Dulmane	/ February 27, 2017
Baarlamaanka midowga Yurub ayaa waraaq cabasho iyo cadho isugu jirta uqoray xukuumada xaalwaaga ah ee Itoobiya wuxuuna baarlamaanku waraaqdiisa kumuujiyay sida ay ooga xun yihiin qaabka loola dhaqmayo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kujira gacanta ciidamada wayaanaha.
Waraaqdan kasoo baxday baarlamaanka Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in baarlamaanku uu xukuumada wayaanaha kadalbanayo in xoriyadiisii lasii Dr Marara Gudina oo ciidamada gumaysiga Itoobiya gacanta ugu jiray mudo sanad kudhawaad ah kaas oo lasheegay in lagu iqaabay xukun dheer.
Ciidamada wayaanaha ayaa gacanta kudhigay Dr Marara Gudina kadib markuu kaqayb galay kulan baarlamaanka Yurub ay qabteen oo lagaga hadlayay xaalada qalafsan ee wadanka Itoobiya wuxuuna Dr Gudina xiligaas sheegay in xukuumada wayaanuhu ay xasuuq kawado dhulka Oromada.
Dr Marara Gudina ayaa lasheegayaa tan iyo intii gacabta lagu dhigay in uu mutay iqaab aad badan waxaana waraaqda lagu sheegay in uu maxbuuskan lasoo darsay xanuun uu kaqaaday jidh dilkii loogaysanayay.
Kooxda TPLF ayaa caadaysatay in ay xabsiyo dhaadheer oo lagu iqaabo dhigto hadba cidii kasoo horjeeda aragtidooda guracan waxaana laxasuusan yahay kumanaan kuxidhan goobaha iqaabta ee Ogadenia ay kasamaysteen iyo kumanaan kuxidhan dhulka intiisa kale.
Sikastaba ha ahaatee waraaqdan canaanta iyo wax sheega isugu jirtay ee kasoo baxday baarlamaanka midowga Yurub ayaa taliska wayaanahalagaga codsaday in uu xoriyadoodii siiyo dadka faraha badan ee uu Dr Gudina kujiro.